Thermal Engines - Ikkaro
kudzidziswa >> Motors >> Mota dzinopisa
Un injini yekupisa seti yezvinhu zvemishini, iyo inobvumidza kuwana meyiki simba kubva ku chafarizhi chemvura inoomeswa inopfuura napo.
Yakanaka vhidhiyo pane kushanda kweiyo 4-sitiroko injini. Izvo zvikamu zvina, jekiseni, kumanikidza, kuwedzera uye kupera kunonyatso kuoneka, pamwe nekushanda kwemavharuvhu nemapiston.
Nzira yekubatanidza injini
Maitiro ekuunganidza iyo 4-sitiroko injini. Kufanana nevhidhiyo yekushanda kweinjini, inodzidzisa zvikuru, kunyange zvazvo zviri nani kutora injini yekare, kuiputsa uye kuidzosera pamwe chete. Imwe yeakanakisa maitiro andakaita mubasa rangu rose.
Kuvaka Homemade Steam Injini
Via Argentine Modeling
Ini ndawana aya ma rairo ekuti ungavaka sei yakapusa steam injini inoshanda chaizvo mushe.
Pisitoni inotenderedzwa pachigadziko chendarira
Chimwe chidimbu chendarira chinoshandiswa mu gasi chine mativi mana (imwe yemafurati andinoshandisa sevhisi yeinjini) yemusoro we cylinder shandisa mari yemhangura yakatengeswa netini.
Shandisa chidimbu chealuminium heatsink seyakabatana pakati pesirinda ficha uye yeiyi silinda bracket.
Chidimbu chendarira chakatopedzwa nemeso mana anoiburitsa kunze kwechigadziko chemagetsi ndicho chidimbu chinotsigira humburumbira uye chiri kutarisira kudyisa humburumbira neutsi
Kiyi iyo ini yandinotora kubva mugesi humburumbira yemhepo kutonhodza seyekumisa bhaira iyo yandinozodzora ne servo.
Ona chinyorwa chakazara
Eolipíla kana Aeolus weHeron
La Eolipilla kana Aeolus weHeron inoonekwa seye yekutanga kupisa injini munhoroondo.
Muvambi waro aive injinjini yechiGreek uye nyanzvi yemasvomhu Heron weAlexandria (Mukuru) wezana ramakore rekutanga AD Heron anoonekwa semumwe wevanyori vekare vekare, zvidzidzo zvake nemabasa anomiririra nguva yechiHellenistic.
Pazvinhu zvake zvinonyanya kuzivikanwa zviri Tsime raHeron uye iyo Eolipila (aelópilo kana aélópila) yatinozotaura zvinotevera. Pamusoro peongororo dzakawanda pamasvomhu, optics uye pneumatics yaakange ari iye muvambi.
La Aeolipila, Iyo inoumbwa neburi rakakombama kubva mairi machubhu akakombama anobuda nawo ayo mweya wemvura unobuda uye unoita kuti utenderere.